Doppler Ultrasonic Flowmeter Warshada |Shiinaha Doppler Ultrasonic Flowmeter Soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaal
Taxanaha DF6100-EP Doppler la qaadi karo Ultrasonic Flow Meterwaxaa loogu talagalay in lagu cabbiro qulqulka mugga ee marinnada xiran, xariiqda dhuumaha waa in ay ka buuxaan dareereyaal, waana in ay jiraan xaddi go'an oo goobooyin hawo ah ama adkaha adag ee dareeraha ah.
mitirka socodka Doppler ultrasonic wuxuu muujin karaa heerka socodka iyo isu geynta socodka, iwm., waxaana lagu habeeyey 4-20mA, wax soo saarka OCT.
Taxanaha DF6100-EH Doppler Gacanta Gacanta Ku Haya Ultrasonic Flow Meterwaxaa loogu talagalay in lagu cabbiro qulqulka mugga ee marinnada xiran, xariiqda dhuumaha waa in ay ka buuxaan dareereyaal, waana in ay jiraan xaddi go'an oo goobooyin hawo ah ama adkaha adag ee dareeraha ah.
Taxanaha DF6100-EI Doppler Gelida Ultrasonic Flow Meterwuxuu cabbiri karaa tuubooyinka birta ama caagga ah oo leh xaddi xabbo oo hawo ah ama adkaha joogsada.
Farsamada horumarsan waxay u oggolaanaysaa qalabkan inuu ku shaqeeyo kalsooni sare iyo dayactir hooseeya.Turjumaanayaasha Gelida waxay oggolaadaan in qalabka lagu rakibo iyada oo aan la joojin cadaadiska nidaamka ama socodka.
DF6100-EC Doppler Ultrasonic Flow Meter-ku-saaranwaxaa loogu talagalay in lagu cabbiro qulqulka mugga ee dareeraha gudaha marinnada xiran, xariiqda dhuumaha waa in ay ka buuxaan dareereyaal, waana in ay jiraan xaddi go'an oo goobooyin hawo ah ama adkaha adag ee dareeraha ah.
mitirka socodka Doppler ultrasonic wuxuu muujin karaa heerka socodka iyo isu geynta qulqulka, iwm, waxaana lagu habeeyey 4-20mA, Relays, wax soo saarka OCT.